အရမ်းချစ်တယ်တဲ့ ဗျာ ကယ်ကြပါဦး (ဗိုင်းရ& — MYSTERY ZILLION
အရမ်းချစ်တယ်တဲ့ ဗျာ ကယ်ကြပါဦး (ဗိုင်းရ&
October 2008 edited April 2009 in Antivirus & Virus
ကျနော့် ရဲ့ Icon တွေအကုန်လုံး ပြီးတော့ dll ဖိုင်တွေ ပါ ပုံပြောင်းနေလို့ ပါ..
အကုန်လုံး အပြင် mycomputer ကလည်း ပြောင်းသွားပြီဗျ
love ဆိုပြီးတော့ ဘေးမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံနဲ့ Icon ပုံတွေဖြစ်ပြီးတော့
Task Manager ထဲမှာတော့ ဖိုင်တွေက ~.~ က တစ်ခု . , . က တစ်ခု
နဲ့ စက်လည်း အရမ်းကိုလေးနေပါတယ်ဗျာ
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပြန်လည်ကယ်တင်ရမလည်း မသိတော့ ၀ူးဗျာ
It will take time if you try to kill virus therefore format HDD and reinstall WinXP, after everything is reinstall. Installed Acronis true image 9.1 workstation and image your system. When something wrong you can restore your windows inafew minutes. I can mail you how to use acronis true image procedures. if you want to get mail me my email is [email protected]
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် သိဘူးဗျ ...။ (ကြုံမှမကြုံဖူးသကိုး)
ရမ်းသမ်းပြောရင် explorer.exe သတ်နည်းထဲမှာကြည့်ဗျာ ..။
antivirus ကမကယ် နိုင်ရင် format သာလုပ်လိုက်ပေတော့ ...။
( c:\_windows\_.sys )(C:\_WINDOWS\_system32) ဆိုတာကြီးတွေထဲမှာ ..sys လည်း ပါတယ် နောက် dll file တွေ ကလည်း В«~.~В» ဒီလိုနာမည်လေးတွေနဲ့ ဗျ ပြီးတော့ Icon တွေမှာလည်း အရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာတွေပဲ မြင်ရတယ် dll တွေကလည်း ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး......အီး နောက်တစ်ခုက တော့ photo.exe and fun.exe ပြီးတော့ ဘလော့လိပ်စာတစ်ခုဗျ ဘာတွေမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ ငိုချင်လာပြီဗျာ Format လုပ်ပစ်ဖို့ကလည်း ကျနော်က ဒေတာတွေ ကို အများကြီးထည့်ထားမိတယ် ပြန်သွင်းဖို့ဆိုရင် မလွယ်ဘူးဗျ ... အဲဒါကြောင့် ပါ ဗျာ ကူညီပေးပါ...
ဘယ်ကနေထည့်ရမှန်းလည်း မသိ၀ူးဖြစ်နေတယ် ထည့်လို့လည်း မရဘူး ဗျာ URL Links ပဲရှိတယ်ဗျာ
uploading လုပ်လိုက်တော့လည်း ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိဘူး ဗျာ ...........
myanmarmen, နောက် antivirus ရှိတဲ့ စက်တလုံး မှာ virus စစ်ပြီး window Repair ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။:67: Ok မှာပါ။ :103: မငိုတော့နဲ့ တိတ် တိတ်။:103:
CyberVampire wrote: »
အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ........ ဒါပေမဲ့လို့ ကျနော် လုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ...
mycomputer ရဲ့ ပုံက အရင်လိုပဲ ဖြစ်နေတုန်းပဲဗျ ... virus ကတော့ မရှိတော့ဘူးထင်တယ်
ဒါပေမဲ့ ကိုက်သွားသေးတယ်ထင်တယ်နော်... အဲဒါ ဘယ်လိုပြန်လည် ပြုပြင်ရမလည်း ... ဗျ...
မညိုတော့ဘူးနော် ဟီးဟီး :5::D:103::77::77: ရှဲရှဲနိ cyber vampire ရေ...
KIS 2009 နဲ့ သတ်လို့ရပါတယ်.. trojan လို့ ယူဆ ထားတယ်ဗျာ.
အဲ.. ဆေးကတော့ ဒီက အစ်ကိုတို့ ညီတို့ရေ.. ထူးထူးထွေထွေမလိုဘူး ဗိန္နောနဲ့ ပျောက်တယ်..
Ace Utility ဆိုတာနဲ့ ပျောက်ပါတယ်.
Icon တွေ ပြန်ချိန်းချင်ရင်တော့ဗျာ Tune Up နဲ့ ချိန်းလိုက်ကြပါဗျာ..
<<~.~>> ဆိုတာကို end process tree ဆိုတာနဲ့ နောက်တစ်ခါ ပြန်မတက်အောင် အရင် ကစ်ထားဖို့ လိုမယ်..
အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ အလွယ်တကူပဲ လုပ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာ။ www.autoitscript.com မှာ သွားကြည့်ပေတော့။ အထင်မကြီးကြပါနဲ့ဗျာ.. နောက် virus လို့ ပြောလို့မရတဲ့ စိတ်အနှောင့် အယှက်ဖြစ်စရာ program ငယ်လေးတွေ။ :2:
ဗမာပြည်သားထိသွားတာက iloveyou virus ပဲကို။ အဲဒီ virusက ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ နာမည်ကြီး။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အနှံ့ ဘီလီယန် များစွား ဆုံးရှူံးခဲ့ရတယ် ဒင်းကြောင့်။ အဓိက ကအီးမေးကနေဝင်တာ။ ခင်ဗျား outlook သုံးလား။ attachment ဖိုင်တွေ မှာ iloveyou တွေတွေ့ ရင် ဖျက်ပလိုက်။ အဲဒီက အဓိကဝင်တာ။
ဒီမှာ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် လုပ်နော်။
အစ်ကိုပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ၊ အဲဒါက virus လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ ဥပမာ - photos.exe လိုဟာမျိုးကို သွားပြီးနှိပ်လိုက်မှကိုယ့်စက်ထဲ၀င်တာပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ .exe file တွေကိုမဖွင့်ကြည့်တာ ဘေးအကင်းဆုံးလို့တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အဲဒါကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲသိချင်ပါတယ်။:) နဲနဲလောက်ရှင်းပြပေးပါ နောင်တော်တို့ရာ။:5:
basic လောက်တော့ တတ်မှ ဖြစ်မယ်.. Vb ပေါ့
သတ်နည်းလေး ဘယ်သူများ ရေးမလဲလို့.. စောင့်ကြည့်နေတာ.. မရေးကြတော့ ကျွန်တော်ပဲ ရေးတော့မယ်.. ကျွန်တော် သတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့ :P
ကူညီဖြေရှင်းပေးသော ညီအစ်ကို များကို ကျနော် myanmarmen မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ
ကျနော့်ကို ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီကောင်ဗိုင်းရပ် အခုတော့ ဘယ်ကို ပျောက်သွားလည်းကို မသိတော့ဘူးဗျာ
ဒီဗိုင်းရပ်ကို ရေးခဲ့တဲ့လူကိုတော့ အားနာပါတယ်................ အရမ်းကို ဒုတ်ခ ရောက်သွားတယ် ဗျာ
အခုတော့ အားလုံးဟာ နေသာတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပါပြီ........
ကူညီဖြေရှင်းခဲ့သော ညီအစ်ကို မောင်နှမများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် .ဗျာ
နောက်လည်း ဗိုင်းရပ်အသစ်တွေ့ ရင် ကျနော် အကူအညီတောင်းဦးမယ်နော် ဟဲဟဲ ....... ခင်လို့ပါ.......:6::6::6::6::5::5::5::77::77::77::77::77:
ဒီလို လုပ်နေကြတာက နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်မရကြလို့ ပညာ လှမ်းပြကြတာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး.. ပုံလေးသာ ကြည့်ကြည့်ပေတော့။ မြန်မာတွေ အချင်းချင်း မကောင်းစိတ် မထားကြဘူးလို့ ထင်ရတာပဲ။ :18:
သူကသီတင်းကျွတ်လို့ပြေးပြီလေ။ သူက ခင်းဗျားကို အပျော်ကြံတာ။ သီတင်းလည်းကျွတ်ကော ချစ်တယ်မပြောတော့ဘူး။ ယူနေရမှာဆိုးလို့တဲ့ ကိုရွှေဗိုင်းရပ်စ်က။
ခင်ဗျားပုံကို ကျွန်တော်ယူသုံးထားတယ် ဒီမှာကြည့် http://myanmaritpros.com/forum/topic/show?id=1445004%3ATopic%3A75732
C:\_Windows\_System32\_ အောက်မှာ ntdetect ဆိုတာလေး hide ဖြစ်နေတာ တွေ့ရမယ်ထင်တယ်.. အဲ့ဒါသာ ဖျက်ပေးကြပါ..
အပေါ်က ပို့စ်မှာ တစ်ခြား virus လို့ ထင်ရလို့ မထည့်ခဲ့ဘူးဗျ.. အခုတော့ အရမ်းချစ်တယ် ဖြစ်တဲ့ စက်တွေမှာ အဲ့ဒီ ntdetect ဆိုတာကြီးပဲ တွေ့တယ်.. C: အောက်က ntdecet ဆိုတာတော့ သွား မဖျက်နဲ့နော်.. boot မတက်ပဲ နေသွားမယ်.. :P
အိုကေသွားပြီ Ko khunmk ရေ အရမ်းအစဉ်ပြေသွားပြီ အမြင်ကြည်လင်သွားပြီဗျာ .... အခုမှပဲ .... :D:5::5: ရှင်းသွားတော့ တယ် အဲလောက်ချစ်လွန်းတော့ လည်း မကြိုက်ဘူးဗျ ... :68::68: .. ကျနော် Tune up 2006 ကို သုံးလိုက်တော့ အားလုံးအိုကေမှာဆိုပြေသွားပြီဗျာ
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ ..:103::103:..........နောင်လည်း ကူညီဦးနော် .... :77:
အဲဒီလို နောက်တစ်ခါ မ၀င်လာရအောင် ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ထားရမလည်း ဗျ... ကျနော်ကို ကာကွယ်နည်းလေး ပြောပါဦးနော် ... ပြန်၀င်လာမှာကြောက်လို့ပါ ဗျာ... :77:
1) USB Device တွေကို autorun မတက်အောင် လုပ်ထားပါ..
2) Hide protected operation system file ကို အမြဲ uncheck ပေးထားပါ..
ဒါပဲ.. ၇၀ % လောက်တော့ သေချာသွားပြီ.. :P
usb device တွေကို double မကလစ်ပဲနဲ့ explorer ကနေဖွင့်ပါ.. ပြီးရင် ပါလာတဲ့ usb device လေးတွေမှာ virus တွေက hide ဖြစ်နေတာတွေ့မယ်.. ၀ါသနာပါရင်တော့ zip ထဲ ထည့်ပြီး သိမ်းထားပေါ့ကွယ်.. မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖျက်ပေါ့.. အလျည်းသင့် [email protected] ကို ပို့ပေးလိုက်.. နောက်ထွက်တဲ့ update မှာ ပါလာလိမ့်မယ်.. အဲ.. သူက virus လို့သတ်မှတ်ရင်ပေါ့..
အားလုံး ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဗျာ mz ညီအစ်ကို မောင်နှမများအားလုံးကို
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ........... :5::5:
i'm juzanewbie.
u can killed that trojan by using trojan hunter 4.7 or later versions
its notamynamar virus . its from india & spain.
changing ican canbdone by
display properties>desktop tab>customize desktop>restore default
//i use bitdefender T.S 2008 + trojan hunter 4.7
သတ်နည်းလေး ဘယ်သူများ ရေးမလဲလို့.. စောင့်ကြည့်နေတာ.. မရေးကြတော့ ကျွန်တော်ပဲ ရေးတော့မယ်.. ကျွန်တော် သတ်တဲ့နည်းလေးပေါ့
နေ့လည်က ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းဆီရောက်လာတဲ့ အရမ်းချစ်တဲ့ကောင်တော့ ခင်ဗျားနည်းပေးပြီး သတ်ခိုင်းလိုက်တာ သေပြီတဲ့ဗျား...။ ပရင့်တောင် ထုတ်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဗျို့...။
here are some of bootable antivirus to get rid of infection see in following link :
ဒိလင့်လေးကို ကူးချပြီး run lite par
အဲတစ်ခုက ဒီကောင်ကို Run လိုက်ရင်
ကွန်ပြူတာ restart ပြန်ကျသွားလိမ့်မယ်
ကျွန်တော်စက်မှာ virus တမျိူး၀င်နေပါတယ်။ My Computer က အရက်ပုလင်းပုံစံနှင့် ၀ုိင်ခွက်နှစ်ခွက်ပုံစံမျိူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများတွင်လဲ (မြန်မာစာသားဖြင့်အရမ်းချစ်တယ်၊ ကားပုံစံ၊ အရက်ပုလင်းပုံစံအမျိူးလဲ ပြောင်းတက်ပါတယ်။ My Computer ကိုလဲ double click ပြီး၀င်လို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်စက်က Admin Right ပေးထားတယ် ပြီးတော့ Symantec နှင့် Avira Antivirus ကို အမြဲ တန်း update လုပ်ပေးပါတယ်။ Full Scan လဲ လုပ်ပြိးပါ ပြီး ဒါပေမယ် မိတော့ မိတယ် သတ်လို့ မရဘူးထင်တယ်။။
ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ဆို တာ ကို နည်းလမ်းကောင်းလေး များရှိရင် ကျေး ဇူး ပြု ပြီး ပြော ပြ ပေး စေ ချင် ဘာ တယ်။ ကျေးဇူးပါ ခဗျ.. :77::77::77: :2::2::2: :O:O:O
ChanMinTun wrote: »
ကျွန်တော်ကတော့ နည်းနညး်ကမြင်းပီးဖွင့်လိုက်တာ သွားရော မထူးပါဘူး format ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်
Here Take It And Run It.
When It is Finish, Your Computer Will Restart.Then the virus is killed.
everything will get ok but you have to restore your icon withaicon customization software. e.g.tweakUI
tell me if you need help.I will help as I can. :67:
Folder ကို Rclick နှိပ်လျှင်
Open ပေါ်ရမည့် အစား Let me be with u
explore ပေါ်ရမည့်အစား . Hi !!!!!!!
မည်သို့ပြန်လည်ဖြေရှင်းလို့ ရပါသလဲ ခင်ဗျာ အဲဒီ ဗိုင်းရပ်၀င်ကတည်းက ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.... ဗိုင်းရပ်ကတော့ သေသွားပါပြီ.....
Folder > R click ကိုနှိပ်လျှင်... ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်ပါသဖြင့် ကူညီပေးကြပါ ဗျာ......
startup က နေဖြုတ်ပါ..
partition အောက်တိုင်းမှာ my gift ဆိုတာ ရှိပါတယ်.. ရှာဖွေ delete လုပ်ပါ။
registry ထဲတွင် ၀င်ပြီး Let me be with u နဲ့ Hi !!!! ဆိုတာကို ရှာပြီး delete လုပ်လိုက်ပါ.. အိုက်ကေ သွားပါမယ်..
ကို khunmk ရေ ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ပြီနော်
ကျနော်လည်း ..... လောသွားလို့ နှိပ်မိနှိပ်ရာ နှိပ်လိုက်မိတာနော်
သို့ပေမဲ့ဗျာ ကူညီပါဦး ............. ကျနော်ရှာတယ် ဗျ Registry ထဲမှာလည်း ရှာတယ်ဗျ
တန်ဖိုးတော့ ထွက်လာပါတယ် သို့ပေမဲ့လို့ ကျနော်ပြောသလို (Let Me be with you)
(Hi !!!!!!) အဲလိုစာသားတွေတော့ မတွေ့ဘူးဗျ
ဒီလို လုပ်ခိုင်းတာလေဗျာ.. ကဲ ဖျက်တာတို့ ဖြုတ်တာတို့ လုပ်ပြီးလောက်ပြီထင်တယ်..
start -> run -> "regedit" (without quote) registry ထဲရောက်သွားရင် Edit
Edit -> Find ( or Ctrl + F) အဲ့ဒီမှာ ရှာတာကို မရှင်းဘူးနဲ့တူတယ်..
ရှာတာက တိတိကျကျ ရှာမှ ရမယ်ဗျ.. my computer ကို right click ထောက်ကြည့်လိုက် let me be with u ဆိုတဲ့အတိုင်းရှာ စာလုံးတိတိကျကျနော်.. L အကြီးဖြစ်သွားမယ် u ကို you ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ မတွေ့ဘူး Hi !!!! ကိုလည်း အဲ့အတိုင်းပဲ အိတ်ကလမ်မေးရှင်းမတ် လေးခု ပါမယ်ထင်တယ် ဟုတ်လား.. လေးခုပဲထည့်..
let me be with u ဆိုတာကို တွေ့ရင် right click -> delete လုပ် ကျန်သေးတယ်.. f3 နှိပ်ပြီး ထပ်ရှာ.. delete လုပ်
Hi !!!! ကိုတွေ့ရင်လည်း right click -> delete လုပ်, f3 နဲ့ ထပ်ရှာ..
အ၇င် နေ့က CYBER သွား သုံး တော့...နက် .က နေ ...ဆော့ ၀ဲ လေး တစ်် ခု ယူ မိ ပါ တယ်...စက် ထဲံ က နေ ပီး ..တဆင့်ပြန် ယူ တာ ဆို တော ့...အဲ ဒီ မှာ ....( အရမ်းချစ်တယ် VIRUS OR SOMETHING ) ပါ လာ ပါ တယ်....ကျနော် စက် ထဲ မှာ မွေ နေ ပီ ...ဒီ ကောင် ...အ ရင် က VIRUS စစ် တာ လဲ မ ရ ဘူး ....ဒါ ပေ မယ့် ..theme...ကို ပြောင်း လိုက် တော ့...နဲ နဲ ..error ...နဲ လာ တယ်...ဘာ ဆက် လုပ် ရ မယ် မ သိ ဘူး...ကူ ကြ ပါ ဦး.။..အဲ ဒိ cafe မှာ ( virus ရောက် ပီ လား.....အေး ရောက် ပီ ...ဒီ စက် ထဲ တော့ရ ပီ ဆို ပီး.)..လူ ငယ်...အသက် ၁၇ လောက် ၂ ယောက် ပြော တာ တော့အမှတ် မထင် ကြား ခဲ့မိ တယ်....အဲ ဒိ အရမ်းချစ်တယ် VIRUS OR SOMETHING ...မှာ ...မေး လိပ် စာ လေး ရယ်....မိန်း ကလေး ပုံ လေး ရယ်....(အရမ်းချစ်တယ် )ဆို တာ ကို ရေး ထား တဲ ့ပုံ လေး ရယ် ပါ ပါ တယ်...လူ နာ မည်နဲ့ဘလော့နာ မည် လဲ ပါ တယ်....
( ဘာ တွေ လုပ် ကြ တာ လဲ ဗျ ....ကို ယ့် ရဲ့အ ပျော် လုပ် ရပ် က...တခြား သူ...တွေ ကို ...မထိ ခိုက် စေ သင့် ပါ ဘူး ဗျာ...)
ဒီ ပို့ကို (http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1693) ဖတ် မိ ရင်း ကျ နော် အ ဖြစ် ကို ေ၇း ပြ တာ ပါ...အဲ ဒိ ဟာ က ရန် ကုန် မှာ ဖြစ် တာ ပါ...DDoS ...Hacker... က မန္တလေး က ဆေး ကျောင်း သား တစ် ယောက် များ လား ဗျာ...ရင် လေး မိ ပါ ရဲံ့ဗျာ..
ကျ နော် ဖြစ် တာ ပို ့ရင် ...ဆက် ရှာ တော့...(http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1530) ရဲ့reply တွေ ကို ဖတ် ရ ပါ တယ်...အား လုံး ကို ကျ နော် စမ်း ခဲ့ပြီး ပြီ သား တွေ...မရ ဘူး ဗျာ...
မူ လရေး သူ က ဒီ လို ပြော တယ်
( Originally Posted by khunmk View Post
Note: System32 အောက်မှာ windows က သူနဲ့ ပက်သက်တာတွေကို ဘာမှ hide လုပ်မထားတတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့် system32 အောက်တွင် hide ဖြစ်နေသော file များမှာ မသင်္ကစရာများဟု ယူဆလိုက်ပါတယ်။)
ကျနော် kogyithu က စက် ကိုpartation တွေ ခွဲ ပြီး သုံး ပါတယ်...အကုန် လုံး မှာ ရောက်နေ ပါတယ်....ပျက် သွား လဲ ပြန် boot ရင် ပြန် ပေါ်လာ ပြ န် ရော ဗျာ...
အား လုံး လုပ် ပြီးသား တွေ ပါ....ခုထိ စက် က မ ရှင်း သေး လို့ပါ....partation တွေ ထဲ ထိ လိုက် ဖျက် ပီး ပါ ပီ....မ ရ လို ့ပါ....ပြန် ပြန် ပေါ််နေ ပါတယ်...
(http://www.mysteryzillion.org/forums/showthread.php?t=1533&page=2) မှာ....ဒီနေရာ လေးက နေပြီး Download ဆွဲချပြီးသတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့...အထက်က အကိုပြောသလိုပဲ C:\_windows ထဲက VBS မှန်သမျှကို ရှာပြီး Kill လိုက်တော့...
Good သွားတာပေါ့ဗျာ။ စမ်းကြည့်ဦး။.......ဆို ပီး ပြော ထား တာ နောက် ဆုံး တွေ့လိုုက် ရ ပါတယ်။။
..................(http://www.fireav.com/downloads/evaluate/FireLite.exe) ဒါလေး နဲ ့စမ်းကြည့်ပါ အုံး မယ်.....
အရမ်းချစ်တယ် virus ရှင်းနည်းလေးရှိရင်မျှပေးကြပါနော်!!!
အဲဒီ ဗိုင်းရပ်လေးများရှိရင်ပေးသနားပါ။ ဒါမှ ကျွန်တော်စမ်းပြီးဘယ်လိုသတ်ရမယ်ဆိုတာသိမှာ ရှိတဲ့လူများပေးကြပါရန်:d
အရမ်းချစ်တယ် Thread ကို Move တာ
ဒါ တတိယအကြိမ် မြှောက်ပါ။
ဒီ Virus နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး
ဒီ Thread မှာဘဲ ဆွေနွေးစေလိုပါသည်။
phyatkyee wrote: »
ကျေးဇူးးဘဲ ရတွားပီ အဲ့ဒါလေးကို run လိုက်တာ..
4share မှာတင်ထားတော့ Down လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ :2:
ifile.it မှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် ... :5:
Nortonကို Update မှန်မှန်လုပ်ထားရင်ဖြစ်ပါတယ်။:67:
down လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ ...... ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ....... :77::77:
့တကယ်လို့ သူက ချစ်တယ်ဆို ကိုယ်ကပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့။
ဟောဒီ software နဲ့ ပြန်ချစ်လိုက်တော့။
:39: ကျွန်တော်က ကံထူးလို့လားမသိဘူး restart တင်မကဘူး window ပါပြန်တင်လိုက်ရတယ် နောင်တော်ယောင်းရင်း ရေ ကောင်လေးက တော်တော်ကြမ်းတာပဲ ကောင်မလေးကိုဘယ်လိုများလုပ်လိုက်တယ်မသိဘူး နော်:((
ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုရင် အရမ်းချစ်တယ် virusဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်explorer.exeနဲ့ခေါ်ခေါ်ပြီးrun
တာဖြစ်လို့ရိုးရိုးတန်းတန်း end process လုပ်လို့မရပါဘူး....tree ကိုပါ end ရမှာပါ....သူက Hide protected system files ကိုအမြဲတန်း check လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်....အဲဒိတော့
ူသူ files တွေကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး....အဲဒါကို Winrar ရှိရင် Winrar နဲ့ကြည့်ပြီး delete လုပ်နိုင်ပါ
တယ်။ reg အတွက် isoft.ygn.cc ကပေးတဲ့ software လေးနဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်.....\_:D/\_:D/\_:D/